Kenya oo mudanayaasha "faraha" isku xaadirinayaan - BBC News Somali
Kenya oo mudanayaasha "faraha" isku xaadirinayaan
Image caption Mudanayaasha baarlamaanka Kenya
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa billaabay hannaan cusub oo xildhibaanada inta ay faraha meel la saaraan kaddibna la sawirayo si loo diiwaan geliyo xildhibaanada ka soo qeybgala kalfadhiyada baarlamaanka.
Afhayeenka baarlamaanka Justin Muturi ayaa beeniyay in arrintani loogu tala galay in looga hortago musuq iyo wax isdabamarin basle looga gol-lahaa sidii loo dedejin lahaa diwaangelinta xildhibaanda u xaadira kalfadhiyada baarlamaanka iyo arrimo dhanka amniga.
Waxaa jiray eedeymo sheegaya in mudanayaasha baarlamaanka ay adeegsanayeen mas’uul ka tirsan baarlamaanka si u ugu fududeeyo in iyaga oo aan ka qeybgalin kalfadhiga baarlamaanka ay helaan gunnooyinka ka qeyb galka kalfadhiyada baarlamaanka ee 58 doolar ah.
Xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa ka mid ah xildhibaanada caalamka ugu mushaaraadka badan.
Weriyaha BBC-da ee magaalada Nairobi Odeo Sirari ayaa sheegaya in xildhibaanada ay subaxnimadii hore ee talaadadii ay diiwaan gelinayeen farahooda ka hor kalfadhiga baarlamaanka ee gelinkii dambe ee isla maalintaasi kaddib fasixii ciidda masiixiga.
Intabadan xildhibaanada ayaa soo dhaweeyay arrintabi balse waxa ay ku doodayaan in aanan horey loogu sii sheegn.
Weriyaha ayaa sheegaya in xildhibaanada loo qabtay muddo usbuuc ah si ay isu diiwaan geliyaan. Usbuucaasi kaddib xildhibaan kastaa waxa uu faraha saari doonaa mashiin loogu tala galay si uu ugu furto qalabka ku rakiban gudaha baarlamaanka ee xildhibaanada isticmaalaan marka ay kalfadhiyada ka hadlayaan.